Soomaali-land oo si kulul ugu hadashay Mooshinkii Baarlamanka Soomaaliya ee lagu wareejiyay Xukumadda Kheyre.
Gudoomiyaha Golaha Guurtida Soomaali-land Saleebaan Maxamuud Aadan oo wariyaasha kula hadlay Magaalada Hargeysa ayaa si kulul u Canbaareeyay Mooshinkii Baarlamanka Soomaaliya ay shalay ku wareejiyeen Xukumadda Soomaaliya si ay faah faahin ugu bixiso.
Xukuumadda iyo Shirkadda TELESOM isku afgartay fulinta go’aamaddii madaxweynaha Soomaaliland
kulan ay ku kala garnaqsanayeen guddidii madaxweynuhu u magacaabay qiimo u yeelida shilingka Somaliland iyo madaxda shirkadda TELESOM ayaa saacaddo badan ku qaatay xarunta madaxtooyadda sida uga doodayeen fulinta go’aamaddii xukuumadda ka soo baxay.
AXMED SEED: Waxaan Maxkamadda ka Furayaa Dacwad ka Dhan ah Shirkii Xisbiga WADDANI
Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee xisbiga Mucaaradka ah ee WADANI, Axmed Mumin Seed ayaa maanta ku dhawaaqay garab la magac baxay Garabka Toosinta iyo Cadaaladda Xisbiga WADANI, waxaanu sheegay inuu Dacwad ka dhan ah Shir-weynihii Golaha Dhexe ee lagu dooranayay musharaxiinta u gudbin doonno maxkamadda sare ee Somaliland.
Kulan magaalada Hargeysa ay ku Yesheen Ergayga QM u Qaabilsan Soomaaliya iyo Madaxweyne Siilaanyo
MAAYARKA HARGEYSA: Guurtidu Xaq Bay u Leeyihiin Go’aankooda Cidii dood qabtana Wadahadalka ha timaado
Maayarka Caasimadda Hargeysa, Cabdiraxman Maxamuud Caydiid Solteko iyo wefti uu hogaaminayey oo safar shaqo dalka dibaddiisa kaga maqnaa ayaa shalay si balaadhan loogu soo dhoweeyey magaaladda Hargeysa.
Duqii degmada Hargeysa oo dhintay
Sagal Radio Services • News Report • April 8, 2013
Waxa Shalay cisbitaal ku yaala magaalada Dubai ee dalka isugu tagga Imaaraadka Carabta ku geeriyoodey Rabbi Naxariistiisa Janno ha siiyee duqii degmada Hargeysa Yusuf Warsame Saciid.
Ciidamo gaar ah oo habeenkii Hargeysa ka sameeya howl-gallo amniga lagu sugayo
Ciidamo gaar ah oo loo yaqaan RRU iyo kuwa nabadsugidda Somaliland ayaa ka billaabay xilliyada magaalada Hargeysa xiliyada habeenkii ah howgallo lagu sugayo ammaanka, kuwaasoo ay ku qab-qabteen dad badan oo shacab ah.
Hoggaamiyihii mucaaradka ee jabhadda SSC oo wasiir ka noqday maamulka Somaliland
Sagal Radio Services • News Report • October 14, 2012
War laga soo saaray xalay xafiiska madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa lagu sheegay in madaxweynuhuu uu xil wasiir u magacaabay hoggaamiyihii jabhadda SSC ee ka soo horjeedday maamulalada Somaliland iyo Puntland ee Saleybaan Ciise (Xagla-toosiye).